Automatic Sliding Door - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Automatic Sliding Door)
Akpanaka Ụlọ Ọgwụ nke Airtight Hospital
Ụlọ Ọrụ Ịgba Ọgwụ Ọgwụ na Ahụhụ na Ahụhụ Ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ na-emechi ọnụ ụzọ bụ nke a na-etinyekarị n'ọnụ ụlọ ọrụ maọbụ ụlọ ọrụ ICU maka ndị ọrụ ahụike ka ha na-abanye n'ụlọ ọgwụ. Ọnụ ụzọ na-emeghe ahụike na-arụ ọrụ nke ntinye nkwụsị na nchekwa nchebe. Ndị na-ahụ maka ahụike chọrọ ịgbatị ụkwụ n'ime ọkụ...
Akwụsị Ọrụ Ịgba Ọgwụ nke Airtight na-emeghe n'Ọnụ Ụzọ Ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ na-emechi ọnụ ụzọ bụ nke a na-etinyekarị n'ọnụ ụlọ ọrụ maọbụ ụlọ ọrụ ICU maka ndị ọrụ ahụike ka ha na-abanye n'ụlọ ọgwụ. Ọnụ ụzọ na-emeghe ahụike na-arụ ọrụ nke ntinye nkwụsị na nchekwa nchebe. Ndị na-ahụ maka ahụike chọrọ ịgbatị ụkwụ...